Vaovao - Dingana fanesorana vato ao amin'ny fikosoham-bary
Ao amin'ny fikosoham-bary, ny dingan'ny fanesorana ireo vato amin'ny varimbazaha dia antsoina hoe de-vato. Ny vato lehibe sy bitika misy habe amin'ny poti-javatra samihafa noho ny an'ny varimbazaha dia azo esorina amin'ny alàlan'ny fomba fitiliana tsotra, fa kosa ny vato sasany manana habe mitovy amin'ny varimbazaha dia mitaky fitaovana fanonganana vato manokana.
De-stoner dia azo ampiasaina amin'ny fampiasana rano na rivotra ho mpanelanelana. Ny fampiasana rano ho mpanelanelana amin'ny vato dia handoto ny loharanon'ny rano ary zara raha ampiharina. Ny fomba fanesorana vato amin'ny alàlan'ny fampiasana ny rivotra ho mpanelanelana dia antsoina hoe vato fomba maina. Ny fomba maina dia be mpampiasa amin'ny famoloana ankehitriny, ary ny fitaovana lehibe indrindra dia ny milina fanesorana vato.
Ny Destoner dia mampiasa ny fahasamihafana amin'ny hafainganam-pandehan'ny fampiatoana ny varimbazaha sy ny vato eny amin'ny rivotra hanesorana vato, ary ny mekanika miasa lehibe dia ny sivana ambonin'ny vato. Mandritra ny asa dia mihetsiketsika amin'ny lalana iray manokana ilay mpanala vato ary mampiditra fiakaran'ny onjam-peo miakatra, izay arahan'ny fahasamihafana eo amin'ny hafainganam-pandehan'ny varimbazaha sy ny vato.
Fisafidianana ny fizotran'ny fikosoham-bary
Ao amin'ny dingan'ny fanadiovana ny lafarinina varimbazaha, ny loto manala izay tsy mitovy amin'ny varimbazaha amin'ny akora amin'ny halavany ny halavany na ny endrika variny dia antsoina hoe fifantina. Ny fahalotoana esorina amin'ireo fitaovana voafantina dia mazàna ny orza, oats, hazelnuts ary fotaka. Anisan'ireny fahalotoana ireny, ny orza sy hazelnut dia azo hanina, fa ny lavenony, ny lokony ary ny tsirony dia misy fiatraikany ratsy amin'ny vokatra. Noho izany, rehefa lafarinina ambony kokoa ny vokatra dia ilaina ny mametraka safidy amin'ny fizotran'ny fanadiovana.
Satria ny haben'ny sombiny sy ny hafainganam-pandehan'ny fiakaran'ny loto toy izany dia mitovy amin'ny an'ny varimbazaha, dia sarotra ny manala amin'ny alàlan'ny fisavana, fanesorana vato, sns. Noho izany, ny fifantenana dia fitaovana iray lehibe hanadiovana ny loto sasany. Ny fitaovana fisafidianana matetika ampiasaina dia misy milina varingarina misy milina ary milina fifantina spiral.